Iindaba-Ukucheba ukutyhubela iminyaka
Ukuba ucinga ukuba umzabalazo wamadoda wokususa iinwele zobuso yinto yanamhlanje, sineendaba zakho. Kukho ubungqina bezinto zakudala bokuthi, kwiLate Stone Age, amadoda achetywa ngetshe, i-obsidian, okanye i-clamshell shards, okanye ii-clamshells ezifana ne-tweezers. (Kulungile.)
Emva kwexesha, amadoda azama ngobhedu, ubhedu kunye neentsimbi zentsimbi. Izityebi zazinokucheba umntu kubasebenzi, ngelixa abanye bethu babesiya kundwendwela. Kwaye, ukuqala kumaXesha Aphakathi, usenokuba ubuye wandwendwela umchebi weenwele ukuba ufuna utyando, ukuphalazwa kwegazi, okanye nawaphi na amazinyo akhutshiweyo. (Iintaka ezimbini, ilitye elinye.)
Kumaxesha akutshanje, amadoda asebenzise i-razor ngqo yesinyithi, ekwabizwa ngokuba yi "cut-throat" kuba… kakuhle, icacile. Uyilo lwayo olufana nemela lwaluthetha ukuba kufuneka ilolwe ngelitye lokuhombisa okanye umtya wesikhumba, kwaye ifuna ubuchule obuninzi (ungasathethi ke ngokujongwa njenge-laser) oza kuyisebenzisa.
KUTHENI SIQALILE UKUTSHULA KWINDAWO YOKUQALA?
Ngenxa yezizathu ezininzi, kuyavela. AmaYiputa amandulo ayecheba iindevu neentloko zawo, mhlawumbi ngenxa yobushushu kwaye mhlawumbi njengendlela yokuthintela iintwala. Ngelixa kwakuthathwa njengokungaqhelekanga ukukhula kweenwele zobuso, oofaro (nkqu nabanye ababhinqileyo) babenxiba iindevu zobuxoki belingisa uthixo uOsiris.
Ukucheba kwamkelwa kamva ngamaGrike ngexesha lolawulo luka-Alexander the Great. Isiko lalikhuthazwa ngokubanzi njengenyathelo lokuzikhusela kumajoni, ukuthintela intshaba ekubambeni iindevu zabo ekulweni ngesandla.
INGXELO YEFASHION OKANYE IIPASI ZEFUX?
Amadoda abenobudlelwane benzondo nothando kunye neenwele zobuso ukusukela ekuqaleni kwexesha. Ukutyhubela iminyaka, iindevu ziye zabonwa njengezinto ezingahlambulukanga, zintle, ziyimfuneko kwinkolo, umqondiso wamandla kunye nokuziphatha okuhle, ukungcola okuqinisekileyo, okanye ingxelo yezopolitiko.
Kude kube nguAlexander Omkhulu, amaGrike amandulo ayesika iindevu zawo kuphela ngexesha lokuzila. Kwelinye icala, abafana abancinci base-Roma malunga ne-300 BC babenomcimbi "wokucheba okokuqala" ukubhiyozela ukuba ngabantu abadala, kwaye bakhulisa nje iindevu zabo ngelixa besentlungwini.
Ngexesha likaJulius Caesar, amadoda aseRoma amlingisa ngokususa iindevu zabo, emva koko uHadrian, uMlawuli wase-Roma ukusukela nge-117 ukuya kwi-138, wabuyisa iindevu.
Abongameli bokuqala abali-15 base-US babengenazindevu (nangona uJohn Quincy Adams kunye noMartin Van Buren babedlala ii-muttonchops ezinomtsalane. Waqala umkhwa omtsha-uninzi loomongameli ababemlandela babeneenwele zobuso, de kwafika uWoodrow Wilson ngo-1913. Kwaye ukusukela ngoko, bonke abongameli bethu bachetyiwe. Kwaye kutheni? Ukucheba ibele kukude.